March 2019 – Mawlamyine Daily
Mawlamyine Daily	စီးပွားရေး, ရွှေဈေး	Leaveacomment March 31, 2019 April 1, 2019 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၃၁ မတ် ၂၀၁၉ ကာတွန်း - ရာဇာသာစည်
Mawlamyine Daily	ကာတွန်း, အနုပညာ, Lifestyle	Leaveacomment March 31, 2019 1 Minute
မတ်လ ၃၁ရက်နေ့ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
မော်လမြိုင်၊ ၃၁ မတ် ၂၀၁၉ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းတွင် အများအားဖြင့် သာယာနေပြီး၊ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ကျန်ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တို့တွင် တိမ်အသင့်အတင့်မှ တိမ်ထူထပ်နေပါသည်။ မနက်ဖြန်မွန်းတည့်ချိန်အထိခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်း ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန် ရာနှုန်း(၈၀) ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းပြီး၊ ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် အများအားဖြင့် သာယာမည်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ လှိုင်းအနည်းငယ်မှ အသင့်အတင့်ရှိမည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၃)ပေမှ (၅)ပေခန့် ရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ် တို့တွင် … Continue reading မတ်လ ၃၁ရက်နေ့ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် →
Mawlamyine Daily	မိုးလေ၀သ	Leaveacomment March 31, 2019 April 1, 2019 1 Minute
Mawlamyine Daily	ကာတွန်း, အနုပညာ, Lifestyle	Leaveacomment March 30, 2019 1 Minute
မတ်လ ၃၁ရက်နေ့ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ
Mawlamyine Daily	စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း, စီးပွားရေး	Leaveacomment March 30, 2019 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၃၁ မတ် ၂၀၁၉ ကာတွန်း - ဖိုးရှုပ်
မော်လမြိုင်၊ ၃၁ မတ် ၂၀၁၉ 1. ဆရာခင်ဗျား ကျနော့သားလေးက ခုဆို ၂ လကျော်ရှိပါပြီ။ သားလေး ၃ရက်သားလောက်ကစပြီး ဘယ်ဘက် မျက်လုံးက မျက်ဝတ်လေးတွေထွက်ပြီး တခြားထောင့်ကနေ မျက်ရည်လေးတွေစီးစီးကျနေပါတယ်။ ခဏခဏ သုတ်ပေးရပါတယ်။ တလလောက်ထိ မပျောက်လို့ ကလေးအထူးကုနဲ့ပြတော့ မျက်စဉ်းဆေးပေးပါတယ်။ ၅ ရက်ဆေးထည့်ခိုင်းပါတယ်။ မသက်သာလို့ မျက်စိအထူးကုဆီ ပြန်လွဲပါတယ်ဆရာ။ မျက်စိဆရာဝန်ကလည်း နောက်ထပ် မျက်စဉ်းဆေး ၂ မျိုး ပေးပါတယ်။ တပတ်ထည့်ခိုင်းပါတယ်။ ခုထိမသက်သာပါဆရာ။ ဘာကြောင့် ကလေးငယ်လေးမှာ မျက်ဝတ်ထွက်တာလဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ စိုးရိမ်ရပါသလား။ ကလေးက တအားငယ်သေးတော့ မျက်စဉ်းတွေပဲခပ်ခိုင်းနေလို့ ဆရာဝန်ဆီလည်းထပ်မသွားတော့ပါ။ 2. ဆရာရှင့် ကျွန်မသမီး ၃ နှစ် ၁ လကျော်နဲ့ သားသား ၂၇ … Continue reading Infective conjunctivitis မျက်စိကျိန်းခြင်း →
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ဆောင်းပါး	Leaveacomment March 30, 2019 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၃၁ မတ် ၂၀၁၉ ကာတွန်း - လူမင်းအောင်
မတ်လ ၃၀ရက်နေ့ ရွှေဈေးနှုန်း
Mawlamyine Daily	စီးပွားရေး, ရွှေဈေး	Leaveacomment March 30, 2019 1 Minute